WWDC 2018, macOS Mojave, watchOS 5, iOS 12, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Pedro Rodas | | apuro, dzakawanda
Vhiki iyo Apple yakabata WWDC 2018, musangano wepasirese wezviuru zvevagadziri vaida kuziva zvakawanda, yapera. kunyanya zvine chekuita nemaApple masystem emwaka unotevera.
Chokwadi ndechekuti masisitimu aya anosvika akatakurwa nenhau, asi sekureva kwevamwe vaongorori, zvakaderera pane zvavaizotarisira kuona nekuti izvo Apple zvaakatarisisa ndezvekuti, zvakare, pakuvandudza iyo iripo system pasina kuita shanduko zhinji.
Zita re Mojave sekutaura kwakaita makuhwa emazuva ano ekupedzisira. Chii chimwe yakasviba modhi inowedzerwa kune iyo yese system uye zvinoshandiswaIchokwadi kuti kune vedu vedu vanopedza maawa mazhinji pamberi peMac, inogona kunge iri nzira inonakidza yekudzivirira maziso edu. Iyo sisitimu yakasviba grey kunyangwe kune vanogadzira uye ichi ndicho chinhu icho vazhinji vanozokoshesa. Kuwedzera kune mashandiro eiyo macOS nyowani murima grey, Apple inoramba ichitora mukana wekukweva nekudonhedza macOS, inowedzerawo basa rekumisikidza mafoto uye mafaera pane desktop yakafanana nemafolda kuitira kuti iwe ugone kungoita. nekudzvanya kamwe chete ona zvirimo.
Iyi yaive imwe yenguva huru yekuApple, apo Craig Federighi, yakaratidza pane hombe kumashure skrini iyo slide ne "HAPANA." hofori achinongedza akananga kune mazhinji makuhwa ekuti iOS uye macOS zvaizobatana mune isiri kure kure remangwana Zvinotaridza kuti vanga vachida kujekesa kuti izvi hazvisi kuzoitika kunyangwe chiri chokwadi icho mazhinji maturusi matsva anoenderana neese masisitimu kushanda uye kuti izvi zvichave padhuze kupfuura nakare kose maererano nemashandiro avanopa kune avo vanoshandisa Mac ne iPhone.
Imwe yezvinyorwa zvitsva yakatiunzira WWDC hurukuro yakakosha yakaitwa zuro masikati munguva yeSpanish, tinoiwana mune inotevera vhezheni ye WatchOS 5, hazvizoenderane nechizvarwa chekutanga Apple WatchNenzira iyi, tinogona kuona kuti chishandiso ichi chinoramba sei chisina rutsigiro rwepamutemo makore matatu tasvika pamusika.
Pasina mubvunzo, Mac software yakakosha kune vazhinji vashandisi uye kuenderana kwayo nemakomputa kwakakosha kuverengera kugadzirisa. Iyo vhezheni nyowani yakapihwa masikati ano paiyo WWDC keyword, MacOS Mojave, inowirirana nezvikwata zvekare uye ichi chinhu chakanakisa kune wese munhu. Rondedzero yeMacs inoenderana yakazara uye chakanakisa pane zvese ndechekuti chinotanga muzvikwata zva2012. Ichokwadi kuti haisi chero komputa ine macOS High Sierra yakaiswa nhasi inozogona kunakirwa neMacOS Mojave, uye zvinoita sekunge sisitimu iri kutoda zvakanyanya uye senguva dzose tichava nemakomputa uko system inozoshanda zvirinani kupfuura vamwe.
Isu tinofanirwa kutaura izvozvo carplay Izvo hazvivandudze zvakanyanya mushure menguva yese zvave zviripo, asi zvirinani kuti vakabvuma kuwedzera zvimwe zvekushandisa uye mune ino kesi mbiri dze idzo dzinoshandiswa nevanhu vazhinji kufamba: Google Mepu uye Waze. Apple ine Mepu yekushandisa yeVashandisi veCarPlay, asi kuve nemaapplication maviri aya hakubvise, asi zvakapesana uye isu tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe vachatanga kushandisa CarPlay zvimwe izvozvi ndiani akaburitsa kuuya kwemaapp maviri aya kuApple system yemota.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » WWDC 2018, macOS Mojave, watchOS 5, iOS 12, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac